Kusolwa indlala ngomlingisi ozibulele | News24
Kusolwa indlala ngomlingisi ozibulele
Durban – Ukhala ngokulahlekelwa wumngani wakhe omkhulu ngokuzuma umlingisi ongaconsi phansi kubalandeli bakhe.
UNtokozo Msibi obenguChester kuYizo Yizo nongu-Amos njengamanje kuZalo utshele ILANGA LeTheku ukuthi ulahlekelwe kakhulu ngokudlula emhlabeni kukaJabu Christopher Kubheka odume kumabonakude elingisa emidlalweni eminingi nasezingomeni nabaculi abehlukene.
Kushaqise abaningi ukuvela kwezindaba zokudlula emhlabeni kwakhe. UKubheka ukhunjulwa abaningi ngokulingisa indawo kaGunman kuYizo Yizo noBazooka kuZone 14.
Kuyona ymibili le midlalo ubephambili engeyena umlingisi owengeziwe. Izindaba zokushona kwakhe zisabalale ngoMsombuluko kusihlwa, kusahlawumbiselwa nokuthi uthathwe yini.
“Uyazi benginaye ngoLwesithathu eZola, size saxabana sibanga ukuthi ngubani ozoyolala kubo komunye. Bekumnandi nje sinkintsha saze saya kwenye yezindawo okwakushuthelwa kuyo iZone 14.
OLUNYE UDABA: UMBONO: Lala uphumule 'Gunman'
“Ingaphezu kuka-15 iminyaka sazana naye. Ngithe uma ngizwa ngalokhu ngamfonela kwathi ophendule ifoni waqinisekiska ukuthi ngempela ubhodile. Uthe bathole amaphilisi lapho eshonele khona,” kusho uMsibi wobutepu kuZalo.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Mavela Masondo uqinisekisile kuTimeslive ukuthi lo mlingisi utholakale ezilengisile wathi kodwa kusazophenywa.
Abanye abasondelene naye bathi uzibulele ngoba enengcindezi, ingekho imali engena ephaketheni ngoba lokhu abedume ngakho yikho abethembele kukho.
Ushiye unkosikazi abeshade naye ngokwesintu nezingane ezingaqinisekiswanga ukuthi zingaki.